Saliidaha JOYSUN waxay leedahay saameyn sifayn wanaagsan, hanti farsamo wanaagsan. Maaddaama ay tahay saliid caag ah, badeecadani waxay hagaajin kartaa waxqabadka waxsoosaarka miisaanka miisaanka, waxayna hagaajin kartaa dusha sare ee badeecada. PE WPC Decking
1. Xasiliyaha Ca-Zn Calizer-zinc xasiliyaha waxaa soosaara teknolojiyad isku dhafan oo gaar ah, sida qaybaha ugu muhiimsan. Waxay beddeli kartaa xasiliyayaasha sunta ah sida leedhka, cusbada cadmium iyo organotin, Tababarku wuxuu caddeeyay in alaabada laamiga ah ee PVC, waxqabadka howshu uu wanaagsan yahay, xasilloonida kuleylka ah waxay u dhigantaa hoggaanka cusbada, maadaama inta badan dejiyaha kuleylka ee u roon deegaanka, ay leedahay qaab hawleed aad u wanaagsan. Xasiloonida kuleylka wanaagsan & awoodda cimilada. Qorraxda ka hortagga daran, ...